HEAD PROTECTION | Kyee Shwe & Sister | KS&S Myanmar | Page 3
Head protection isacrucial matter for workplace safety.
By wearing safety helmets, the workers can be protected against falling objects, heat and electrical hazards, oil spills and chemical hazards and prevented from receiving head injuries.
Each type of head protective equipment has its own specifications and aims to prevent specified hazardous conditions. Thus, it is especially needed to make correct choice in selecting suitable and good quality helmets for your workplace conditions.
လုပ်ငန်းခွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ဦးခေါင်းကို ကာကွယ်ခြင်းသည် အလွန်အရေးပါသော ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပေးသော ဦးထုပ်များဆောင်းထားခြင်းဖြင့် အရာဝတ္တုများ ပြုတ်ကျလွင့်စင် ထွက်လာခြင်း၊ အပူနှင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်၊ ဆီယိုစိမ့်မှုနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ အကာအကွယ်ပေးပြီး ဦးခေါင်း ဒဏ်ရာရရှိခြင်းမှ ကင်းဝေးစေပါသည်။
ဦးခေါင်းအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများတွင် အမျိုးအစားတခုချင်းစီတွင် သတ်မှတ်ထားသော အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေများမှ ကာကွယ်ပေးရန် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ ရှိကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမှန်ကန်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ဦးထုပ်များကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်ရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။